जानि राख्नुस : यस कारण महिलाले ह’ स्त मै’ थुन गरेको राम्रो ! यसरि गर्दा बढी आनन्द मिल्छ । – Jagaran Nepal
जानि राख्नुस : यस कारण महिलाले ह’ स्त मै’ थुन गरेको राम्रो ! यसरि गर्दा बढी आनन्द मिल्छ ।
हिलाहरुले पनि आफ्नो सन्तुष्टि पूरा गर्न ह’, स्तमै थुनको सहारा लिएका हुन्छन् । यौ’ ,न चाहाना पूरा गर्न महिला तथा पुरुषले यौ’ न साथी नभएको अवस्थामा आफ्नो हातको प्रयोगले यौ’, न चाहाना पूरा गर्नु नै ह’स्त मै’थुन हो । यौ’, न साथी नभएको अवस्थामा मानिसले आफ्ना गो’, प्य अ ङ्गलाइ आफैँ चलाएर आनन्द लिने गर्दछन् ।
यो अ ङ्ग मांसपेशीले बनेको नली आकारको एक विशेष अं, ग हो र यस अं गमा निकै नै तन्कन र खुम्चन सक्ने गुण हुन्छ । त’न्कन र खु’म्चन सक्ने गुण भएकै कारण विभिन्न नापको लिं, ग यो, निमा प्र,वेश गर्दा मिल्ने स्थिति रहन्छ ।
किशोरअवस्थामा तथा विवाहपूर्व महिलाहरुले पुरुषसँग यौ, न’ स’ म्पर्क नराखी मै’ थु’ नको उपाय रोज्नु राम्रो कुरा हो । बढ्दो उमेर र विवाह गर्ने उमेर पनि नभएको अवस्थामा यौ ’न चाहाना पूरा गर्ने वैकल्पिक बाटो यहि नै हो । महिलाहरुले पनि विभिन्न उपाय लगाएर आफ्नो उमेर अनुसार यस्तो गर्न सक्छन् । महिलाहरुले आफूलाई कसो गर्दा स’ न्तुष्टि मिल्छ त्यही अनुसार यस्तो गर्दा राम्रो हुने गर्दछ । महिलाहरुले आफ्नो चलाउने केही प’ सा’ उ नुदेखि सु’ म्सु माएर वा अन्य केहि गरेर च र मसुख प्राप्त गर्न सक्छन् ।
महिलाहरुले यसरी नै चलाउनुपर्छ वा घर्षण गर्छन भन्ने स्पष्ट वा कुनै ठीक तरिका भने छैन् । चलाउने वा घर्षण गर्ने बाहेक दबाब दिने बिस्तारै हल्लाउने वा जोडले हल्लाउने तथा यसलाई कुनै वस्तु’माथि थिच्ने’जस्ता अनेक उपायबाट पनि महिलाले आनन्द लिन सक्छन् । त्यति मात्र नभएर महिलाहरुले आफ्नो स्त न, ना इटो, ओ ठ, घाँटीको, छाला,तिघ्रा लगायत शरीरका अन्य अंगको स्पर्श,मर्द’न वा सु ’म्सु ’माएर पनि आनन्द लिन सक्छन् । तर,अचेल बजारमा आएका विभिन्न कुत्रिम साधन तथा वस्तुहरुको प्रयोग गरेर पनि महिलाले अफ्नो इछ्या पुरा ग गर्ने गरेको पाइएको छ ।
यो प्रक्रियालाई कारात्मक रुपमा हेर्ने गरिन्छ । तर, वास्तवमा यसले मानिसलाई फाइदा नै गर्ने गर्दछ । यो प्रक्रियाले इच्छाको दमनबाट हुने तनावबाट मानिसलाई मुक्ति दिने गर्दछ । यस्तो गरेमा मुखमा दाग आउने,आँखाको दुष्टि कमजोर हुने विवाहपश्चात आफ्नो यौ, नसाथीलाई स न्तुष्टि दिन नसक्नेलगायत अनेकौँ भ्रम रहेको छन् । तर, यो कार्यले यस्ता स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै हानि गर्दैन् ।
यो कार्य आफैँले खराबी गर्ने नभए पनि यसैसँग जोडिएर आउने हीनताबोध वा दोषीपनले भने समस्या उत्पन्न गराउन सक्छ । मानिसले गरिसकेपछि आफ्नो मनमा विभिन्न डर तथा भय राखेर समस्या उत्पन्न गर्ने गरेका छन् । बढी मात्रामा गर्नु भनेको पनि शरीरका लागि हानि गर्नु हो । यसलाई निश्चित सीमासम्म सुरक्षित तवरले गर्दा कुनै हानि गर्दैन् ।
हत्तामा दुईदेखि तीन पटकसम्म गर्नु राम्रो हुन्छ तर त्योभन्दा बढी गर्दा नकारात्मक असर पनि पर्न सक्छ । महिलाहरुले गर्दा गो७ ’प्य अ’ ङ्गमा केही प ’सा ’एर आनन्द लिने गरेकाले कुनै वस्तु प ’सा उनु अघि ध्यान पर्याउनु जरुरी देखिन्छ । महिलाले औँ ला पसा’ उनेदेखि लिं आकारको वस्तु प’ सा’ उने गर्दछन् । अहिले प्रसाधनका रुपमा लिं को स्वरुपजस्तो वस्तु बजारमा पाइने भएकाले त्यही वस्तुको प्रयोगबाट बढी यौ ,न साथीसित स’म्पर्क गर्दा आनन्द नपाइन सक्छ ।
त्यसकारण महिलाले लत लाग्ने गरी तथा आवश्यक भन्दा बढी गर्नु हानिकारक मानिन्छ । यसका साथै प्रवेश गराइने वस्तु सफासुग्घर हुन आवश्यक छ । यदि ती वस्तु साफ छैनन् भने विभिन्न सं ,क्र मण देखापर्न सक्छन् ।
त्यसकारण महिलाले कुनै कुरा प’ साएर गर्दा केही ध्यान दिनुआवश्यक छ । यदि बजारमा पाइने त्यस्ता साधनका कारण महिलालाई लत लाग्न सक्छ र वैवाहिक जीवनमा चरम यौ७ ,न स न्तुष्टि प्राप्तिका लागि पुनः यसकै सहारा लिन पर्ने हुन सक्छ ।
शुक्रबारमा डा.सुवोधकुमार पोखरेलले गरेको प्रश्नोत्तर